Umoya ohlanzekile ungayiqinisa kakhulu imiphumela yokushisa komhlaba | Isimo Sezulu Senethiwekhi
Umoya ohlanzekile ungayiqinisa kakhulu imiphumela yokufudumala kwembulunga yonke
Noma ingahle ibe nelukuluku, Ukube umuntu ubekwazi ukuqeda yonke imfucumfucu enobuthi ayikhipha nsuku zonke emkhathininjengoba izinto zinje manje imiphumela yokufudumala kwembulunga yonke ibiyoba yimbi. Kungani? Akufanele kwenzeke okuphambene nalokho?
Umoya ohlanzekile, njengoba ungafunyanwa egameni lawo uqobo, uyinto enempilo kunayo yonke into ephilayo engayiphefumula, kepha isintu singcolisa iplanethi yoMhlaba kangangokuthi isivele yenze ukuthi ilahlekelwe ukulinganisela kwayo ngokwemvelo kangangokuthi sesisungule inkathi entsha yokwakheka komhlaba I-Anthropocene.
Ukuze kufinyelelwe kulesi siphetho esimangazayo, iqembu lososayensi lisebenzise izinhlobo ezine zesimo sezulu zomhlaba ezilingisa imiphumela ebingaba khona uma kususwa ama-sulfate nezinhlayiya ezisuselwa kukhabhoni, kufaka phakathi umule.
Ngakho, Bakwazile ukuthola ukuthi kunama-aerosol athile okuthi namuhla abakwenzayo ukuvikela iplanethi engxenyeni yemisebe yelanga eyitholayo. Ngaphezu kwalokho, uma ukungcola kungasuswa ngokuphelele, izinga lokushisa lomhlaba jikelele belizokhuphuka ngo-0,5-1,1 degrees ngaphezulu kunalokho obekulindelwe, obekungaba inkinga enkulu. Kepha kusekhona okunye.
Abaphenyi bakuthola lokho ukuqeda lokhu kungcola kuzoba nemiphumela ezingeni lesifunda, ukuguqula izimo zezulu ezifana nemvula kwezinye izingxenye zomhlaba. Isibonelo, eMpumalanga ye-Asia babezothola ukwanda okukhulu kwemvula kanye nezehlakalo zezulu ezimbi kakhulu.
Ngakho-ke, yini okufanele uyenze? Akunampendulo elula. Okusizwisa ubuhlungu yilokho, kuleli khulu leminyaka, okusigcina "siphephile." Vele, into yakhe bekungeke kube ukungcolisa, kepha lokho kuyiphutha, engicabanga ukuthi, ngeke sisakwazi ukulixazulula ngaphandle kokuthi sithole indlela. Ukuphelelwa ithemba? Kungenzeka. Kepha indlela izinto ezisebenza ngayo, asikho isizathu esiningi sokuba nethemba.
Uneminye imininingwane lapha.
Indlela ephelele ye-athikili: Isimo Sezulu Senethiwekhi » Isimo sezulu » Ukuguquka kwesimo sezulu » Umoya ohlanzekile ungayiqinisa kakhulu imiphumela yokufudumala kwembulunga yonke
Namuhla iWorld Wetlands Day kanti ibungazwa ngesomiso